ICT for Myanmar: 2012
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်တုန်းက Symantec Backup Exec 2010 ကနေ 2012 ကို upgrade လုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေး ဝေမျှချင်ပါတယ်။
SBE 2010 ကို 2012 ပြောင်းဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာလေးတွေ အရင် စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့...
၁) Upgrade မလုပ်ခင် ဘာတွေအရင် လုပ်သင့်လဲ... ဘယ် Setting တွေကို Backup လုပ်သင့်လဲ။
၂) ရှိပြီးသား Configuration တွေကို Upgradiing Process က အလိုအလျောက် import လုပ်သွားမှာလား။
၃) တကယ်လို့များ Upgrading process fail ဖြစ်ခဲ့ရင် 2010 ကို ပြန်ပြီး roll back လုပ်လို့ ရလား။
၄) 2012 setup file ကို Direct run လိုက်တာနဲ့ upgrade တန်းလုပ်တာလား။
၅) Remote agent, CPS (Continuous Protection Server) Console တို့ကိုပါ upgrade လုပ်ဖို့လိုပါသလား။
၁) ပထမဆုံး 2010 ကို နောက်ဆုံး update patch တွေ install လုပ်ပါ။ SQL server BKUPEXEC service ကို stop လုပ်ပါ။
Program Files\_Symantec\_Backup Exec Directory အောက်က DATA နဲ့ CATALOGS folder ၂ ခုကို copy ကူးပြီး backup လုပ်ထားပါ။
၂) ရှိပြီးသား Configuration Setting တွေအားလုံးကို Upgrading Process က အလိုအလျောက် import လုပ်သွားမှာပါ။
၃) Upgrading process fail ဖြစ်တာနဲ့ အလိုအလျောက် roll back ပြန်လုပ်ပါတယ်။ DATA , CATALOGS folder ၂ ခုနဲ့ old version ကို rebuild လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၄) Download ထားတဲ့ SBE 2012 ကို extract လုပ်ပြီး browser.exe ကို run လိုက်တာနဲ့ upgrade စတင်လုပ်ဆောင်ပါမယ်။
၅) Remote agent ကိုတော့ Core Software installation လုပ်ပြီးတာနဲ့ install လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ CPS ကတော့ SBE 2012 မှာ not available ပါတဲ့ဗျာ။
ကဲ... upgrade လုပ်တာက ဒီလိုပါ။
၁) 2010 ကို live update ကနေ နောက်ဆုံး update patch တွေ update လုပ်ပါ။
၂) Download ထားတဲ့ SBE 2012 ကို extract လုပ်ပြီး browser.exe ကို run ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Instruction တွေအတိုင်း follow လုပ်ပါ။
၃) upgrading process ပြီးတာနဲ့ live update မှတဆင့် နောက်ဆုံး patch တွေကို install လုပ်ပါ။
၄) Media Server ကို reboot လုပ်ခိုင်းတာနဲ့ reboot လုပ်ပေးပါ။
၅) Reboot လုပ်ပြီးလျှင် remote agent ကို upgrade လုပ်ခိုင်းပါမယ်။ Instruction အတိုင်း follow လုပ်ပါ။
Symantect Backup Exec 2012 ကို upgrade လုပ်ပြီးပါပြီ။
ဒီနေရမှာ တခု သတိထားဖို့လိုတာက Symantec က ပေးတဲ့ License Certificate မှာ ပါတဲ့ Serial Number နဲ့ License File က Maintenance Contract အတွက်ပဲ ဖြစ်နေတာပါ။
အဲဒီ License ကိုထည့်ပြီး Upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင် Upgraded SBE 2012 ဟာ Trial အနေနဲ့ ပဲ ပေါ်နေပါမယ်။
ဒီတော့ ဒီ License ကို Symantec Licensing Portal ကနေ တဆင့် register လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါမှ သာ သင် အမှန်တကယ် ဝယ်ယူထားတဲ့ package အတွက် license တွေ ထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ license တွေ ထည့်ပြီး Upgrade/Install လုပ်မှသာလျှင် Trial Version ဆိုတာ ပျောက်သွားမှာပါ။ တကယ်လို့ register မလုပ်မိပဲ upgrade/install လုပ်မိတယ်ဆိုရင်လဲ နောက်မှ ပြန်ပြီး License တွေကို Install လုပ်လို့ရပါတယ်။
မရှင်းမလင်းတာများရှိရင် အောက်က လင့်မှာ Video လေးနဲ့ ရှင်းပြထားတာလေးရှိပါတယ် သွားကြည့်လိုက်ပါ။
အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံလိုမျိုး သင့် Server Windows မှာကြုံရပြီဆိုရင် တော့ သေချာပါပြီ သင့် Server ရဲ့ BCD Corrupt ဖြစ်တာပါ။
အောက်က နည်းအတိုင်း ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်။
Windows CD/DVD နဲ့ Boot တက်ပါ။
Repair Option မှာ Command Prompt ကို သွားပါ။
Command Prompt Windows ထဲ ရောက်ပြီဆိုရင် အောက်ပါ Command များကို ရိုက်ထည့်ပါ။
စက်ကို Restart လုပ်ပြီး Hard Disk ဖြင့် Boot တက်ပါ။
သင့် Windows မူလ အတိုင်း အကောင်းပကတိ ပြန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ဘာကြောင့် ဒီ Boot file တွေ ပျက်ရလဲ ဆိုရင်...
- Virus ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
- SCSI or RAID အစရှိတဲ့ Disk Controller တွေ ပါဝင်တဲ့ Server တွေကို Force Shutdown မကြာခဏ လုပ်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
- NAS or USB Drive တွေ တပ်ထားပြီး ဖြုတ်လိုက် ပြန်တပ်လိုက် လုပ်တဲ့ အခါ BIOS Configuration တွေ ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကို သတိမထားမိလို့ Configuration ကို ပြန်မပြင်ပဲ Boot တက်တဲ့အခါ Boot မတက်ပဲဖြစ်တယ်ပါတယ်။
Google ကနေ International phone call တွေကို Google Voice သုံးပြီး ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့... တစ်မိနစ်ကို USD 35 Cents ကျပါမယ်။
စင်ကာပူကို ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့... တစ်မိနစ်ကို USD2Cents ကျပါမယ်။
နိုင်ငံအလိုက် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားတွေကို ဒီနေရာမှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့ အတွက် ကြိုတင်ငွေ Credit ဖြည့်ထားရပါမယ်။
အနည်းဆုံး US$ 10 ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
ဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့ အတွက် လိုအပ်တာကတော့ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ Google Mail, PC or Laptop with completed Headset to call phone, Internet Access တွေလိုပါတယ်။
How to copy text from scanned image by using Microsoft Office 2010 applications?
တခါတလေ မှာ Print လုပ်ပြီးသား Documents တွေကို Softcopy ပြန်လိုချင်တာမျိုးကြုံဖူးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မှာ Softcopy လဲ မရှိတော့တဲ့ အခါ သင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ...
လွယ်ပါတယ်... သင့်လိုအပ်ချက်ကို Microsoft က သိပါတယ်... သူ့ ရဲ့ Office 2010 မှာလဲ အရင် Office တွေလို OCR ဆိုတဲ့ စနစ်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အောက်မှာ ဘယ်လို လုပ်ရင် Sofcopy ပြန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Installation, Setup and Configuration တွေ လုပ်တတ်ပြီဆိုယုံနဲ့ ကျေနပ်နေလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး။
Troubleshoot လဲ လုပ်တတ်မှ ဖြစ်မှာပေါ့။
ကဲ... သင်ဟာ Fortigate unit တခုကို NAT/Route mode နဲ့ Configure လုပ်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် သင့် Fortigate နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Internal Network က Deivce တွေက Internet access မရဘူးဖြစ်နေပါပြီ။
ဘယ်လို Troubleshoot လုပ်ကြမလဲ...
အောက်မှာ Troubleshoot လုပ်ဖို့ စစ်ဆေးရမယ့် အချက်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း တချို့ company တွေက သူတို့ ရဲ့ company email domain ကို Google Apps နဲ့ Administration လုပ်လာကြတာ များပါတယ်။
ဒီအခါမှာ သူတို့က Gmail အနေနဲ့ email ကို မသုံးချင်ပဲ... Microsoft Outlook နဲ့ ပါ အသုံးပြုချင်ကြပါတယ်။
ဒါဆို သင့် အနေနဲ့ Microsoft Outlook ကို Configure လုပ်ပေးဖို့ လိုလာပြီပေါ့။
ကဲ... POP နဲ့ လုပ်ပေးမလား IMAP နဲ့ လုပ်ပေးမလား? ကျတော်ကတော့ သင့်ကို IMAP သုံးပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ POP က Multiple PCs တွေနဲ့ အသုံးပြုချင်တဲ့ အခါ email message တွေကို အားလုံးမှာ sync မဖြစ်တာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
IMAP ကတော့ sync ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။
ကဲ... အောက်မှာ Gmail with Google Apps Domain ကို Microsoft Outlook နဲ့ Configure လုပ်ပုံလေး တွေ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
အမြဲတမ်းအားဖြင့်တော့ Fortigate ကို manage လုပ်ဖို့အတွက် Admin account တစ်ခုထက်ပို ဖန်တီးထားလေ့ရှိပါတယ်။
ကဲ... Administrator account အသစ်တခုလောက်ကို super_admin profile နဲ့ ဖန်တီးကြည့်ရအောင်။
super_admin profile က Fortigate feature တွေကို full access ရပါတယ်။
Network တခုရှိတယ်။ Internet and Private Network ကို Router နဲ့ ကြားခံ လုပ်ပေးထားတယ်။
အဲဒီ Router နဲ့ Private Network ကြားထဲမှာ Fortigate ကို ထည့်သုံးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Network နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို မပြောင်းချင်ဘူး။
အောက်က ပုံ အတိုင်းပေါ့ဗျာ။
ဒီတော့ Fortigate လေးကို install လုပ်ကြည့်ရအောင်။ သင် install လုပ်လိုက်တဲ့ Fortigate ဟာ အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမယ်။
- Internet ကနေ Private Network ကို access လုပ်ခွင့်ကို တားဆီးနိုင်ရမယ်။
- Private Network က user တွေကတော့ Internet ကို Access လုပ်နိုင်ရမယ်။
- Fortigate ကနေ user တွေရဲ့ usage status ကို monitor လုပ်နိုင်ရမယ်။
ကဲ... စ လိုက်ရအောင်။
How to copy text from scanned image by using Micro...